Amandla omphakathi akhanya ngohlelo lokufunda lwe-IMEX America
Ikhaya » Izindaba Zamuva » emihlanganweni » Amandla omphakathi akhanya ngohlelo lokufunda lwe-IMEX America
Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Ezokuvakasha • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Ngokusho kweDalai Lama: "Ngaphandle komphakathi wabantu, umuntu oyedwa ngeke akwazi ukusinda." Ukubaluleka kwemiphakathi kuyavela kulo lonke uhlelo lokufunda e-IMEX America, ngoNovemba 9-11, ngamaseshini amboza amandla okuxoxa izindaba, amanani abiwe, kanye nemvelo yomuntu.
Imfundo yamahhala ihlanganisa amandla okuxoxa izindaba, izindinganiso ezabiwe kanye nemvelo yomuntu.
Intatheli uSharad Kharé uzokwethula umhlangano wokucobelelana ngolwazi ngezindaba kanye nekhono elingaziwa kangako lokulalela izindaba.
USharad uzohola ababambiqhaza ngokuzivocavoca okuxoxisanayo okukhuthaza abanye ukuthi babheke ukuthi indaba yomuntu ngamunye ingalakha kanjani ifa labo.
Ubuhlakani beDalai Lama baziwa kakhulu yintatheli uSharad Kharé owayisingatha futhi wayibhala phansi, kanye namanye amagama amakhulu eHollywood, ibhizinisi, namasiko, njengengxenye yendima yakhe njengomsunguli we-Human Biography. USharad uzokwethula umhlangano wokuxoxa ngezindaba kanye nekhono elaziwa kancane lokulalela izindaba. Esiwombeni sesibili, “Liyini ifa lakho?,” USharad uzohola ababambiqhaza ngokuzivocavoca okuxoxisanayo okukhuthaza abanye ukuthi babheke ukuthi indaba yomuntu ngamunye ingalakha kanjani ifa labo.
USharad Kharé, Umsunguli We-Biography Yomuntu
Izinkulumo zesitayela se-TED ziyakhanya emvelweni yomuntu
IHuman Biography ingenye yezinhlangano ezintathu ezethula izingxoxo ezisheshayo zezitayela ze-TED ngesikhathi sombukiso. Lezi zingxoxo zigxile ezicini ezahlukene zemvelo yomuntu. UMhlaba Othandekayo yinhlangano ehloselwe ukusiza amaqembu - kusuka kosaziwayo bezemidlalo kuya kochwepheshe bebhizinisi - ukusungula ngokushesha izibopho ezigxile. Indlela yabo yokuxoxa izindaba isekelwa yisayensi futhi iqembu lichaza ukuthi "ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuthola incazelo enhle ezenzakalweni ezedlule kuxhumanisa nokuzethemba okuphelele nokwaneliseka okukhulu kwempilo." Abajoyinayo yiTLC Lions esungulwe nguGian Power owashiya umhlaba wobumbano ngemuva kwenhlekelele yomndeni wakha umphakathi. Umphumela uba yiqembu lomhlaba wonke labantu abakholekayo - "amabhubesi" - abelana ngezindaba zabo, izimpi nokunqoba ukuze basekele futhi bakhuthaze abanye. UGian uyachaza: “Ngizimisele ukwenza izindawo zokusebenza zithandeke ngokwengeziwe ngokomzwelo, izindawo lapho ubethemba khona abaseduze kwakho, lapho amaqembu ezizwa njengemindeni yesibili. Akuyona into efanele ukwenziwa nje kuphela kodwa kuphoqelekile kwebhizinisi futhi kuxhumene ngqo nokukhiqiza ngakunye nokwamabhizinisi. ”
Umnyombo oqinile ohlanganisa imiphakathi ngamanani abiwe - hhayi ukubalwa kwabantu. Lokho kushiwo uDavid Allison, umsunguli weValuegraphics. Uchwepheshe ekuziphatheni kwabathengi, uDavid ungumeluleki wemikhiqizo yomhlaba kanye nommeli oholayo wokulahla imibono yabantu eseyiphelelwe yisikhathi. Esikhathini esikhethekile se-Headliner sabahambeli be-IMEX America, uzodalula imiphumela yocwaningo oluqhamuka phansi oluhlola ukuba khona kwemicimbi nokuzibandakanya ngemuva kwesifo. Lokhu kulandelwa uchungechunge lwemihlangano yokucobelelana ngolwazi phakathi nezinsuku ezintathu zombukiso kufaka phakathi eyodwa echazwe ngokuthi "umbukiso womdlalo oyingxenye, ingxenye yokusebenzela" eyenzelwe ukuxhuma amachashazi phakathi kwamagugu abantu abalulekile nemibono emisha yokwenziwa kwamanani eqhutshwa ngamanani.
Umkhiqizi wemicimbi yomhlaba uMelissa Park naye uthatha indlela entsha yokucabanga kabusha imicimbi esimweni sebhizinisi esiguquliwe. Emhlanganweni wakhe Ukwakha kabusha umcimbi ongaphakathi komuntu uzokweluleka ngokuthi ungawahlanganisa kanjani amandla nesasasa lomcimbi obukhoma ngesipiliyoni esibushelelezi nesiphephile, abelana ngezifundo ezivela kubakhiqizi bomculo.
Imfundo efike ngesikhathi eyenzelwe zonke izitayela zokufunda
UCarina Bauer, isikhulu esiphezulu se-IMEX Group, uchaza ukuthi kungani indikimba yomphakathi ifike ngesikhathi: “Manje sekwenziwe kabusha ukuqashelwa kokubaluleka kokwakha umphakathi. Kwabaningi abakule mboni, lo mbukiso umele ithuba eliyingqayizivele lokuhlangana nozakwethu nozakwethu abangakaze bababone eminyakeni ecishe ibe ngu-2. Sifuna ukunika ababekhona ithuba lokuthi baphinde baxhumane futhi bathuthukise isethi yabo yamakhono, ngamathuluzi okuzakhela imiphakathi yabo emihlanganweni nasemicimbini yabo. Ngakho-ke, siye salolonga uhlelo lwethu lokufunda ngokuhlola izinto ezahlukahlukene zokuthi kusho ukuthini ukwakha nokuba yingxenye yomphakathi - futhi izikhathi zethu zokufunda ziholwa ngabantu abathile abakhuthazayo abanezindaba ezinhle kakhulu abangazisho. ”
Uhlelo lokufunda lwamahhala ku IMEX America iyaqala nge-Smart Monday, enikwe amandla yi-MPI, ngomhla ka-8 Novemba futhi iyaqhubeka nochungechunge lwama-workshops, amatafula ezihloko ezishisayo kanye nezingqungquthela phakathi nezinsuku ezintathu zombukiso - konke kuklanyelwe ukubhekana nezitayela ezahlukene zokufunda.
IMEX America yenzeka ngoNovemba 9-11 endaweni entsha - iMandalay Bay, eLas Vegas - ngeSmart Monday, enikwe amandla yi-MPI, ngoNovemba 8. Bhalisa inzalo lapha.
Ngemininingwane engaphezulu mayelana nezinketho zokuhlala kanye nokubhuka chofoza lapha.
Isikhumulo semikhumbi-mkhathi esikhulu kunazo zonke emhlabeni ...
Kushone umshayeli wendiza oyedwa kwalimala ababili endizeni eyindiza...
Kungani iSpain imisa Ithuba Elikhulu Lomhlaba ...
Isexwayiso esiphuthumayo sikaNobhala-Jikelele Ohloniphekile we-UNWTO...
AmaBrits acabanga ukuthi imaski yobuso kufanele iqhubeke nokugqokwa...
I-Holland America Line iqala isizini nge-Cruise ukuze...
Beyond Zoom: I-IMEX America yenze imihlangano yomuntu siqu yaba mihle...
I-Empire State Building yokwengeza Abathengisi be-Pop-up ...
Imiklomelo Yezokuvakasha Yomhlaba wonke imemezela abaphumelele emhlabeni wonke nge ...
UMichael Jackson, iNkosi yasePop Las Vegas yokuzalwa kabusha ...
Okusha Kumasinema Kuphela - UKhisimusi Nabakhethiwe:...
Ukuthuthukisa Ubuholi Bethimba Ngezikhathi Ezingaqinisekile
I-Detox Yasekhaya Yotshwala Umlutha
Usihlalo we-African Tourism Board kanye nama-Ambassadors Manje ...
I-Acura Integra entsha: I-Bold ne-Turbo Ikhokhiswe ngo-2023
UNgqongqoshe waseSeychelles Ukhuthaza Umyalezo Wezokuvakasha Komhlaba ...
I-IMEX BuzzHub Live entsha inikeza iwindi emhlabeni we...
Kusuka eSuper Fun Hot Hot to Security Walls and Patrols
Isistimu yokukhanya kwethrafikhi imise izingxenye ezimbili kwezintathu ze-Brits kusukela...
Ingxenye yezakhamizi zase-UK ihlela uhambo oluningi ngonyaka ozayo
INew Delhi ibhekene nokuvalwa ngenxa yentuthu enobuthi ebulalayo
Kungani Ukhetho Lwe-UNWTO Kufanele Lube Into Ephuthumayo...
Amadolobha Ahlakaniphe Kakhulu Emhlabeni Wanamuhla
Enye inkantolo Ukunqoba eSeychelles ngu-Alain St. Ange
Indiza yokuqala yabagibeli bamazwe aphesheya iphuma ...
Kuphephile eParis ngemibhikisho emikhulu ne-COVID?
Amaqiniso Athakazelisayo, Ajabulisayo Nge-Caribbean
I-Air Tanzania iyala umshayeli omusha we-Boeing kanye nabagibeli...
I-Jamaica Tourism ne-Grupo Pinero: Ezokuvakasha Okukhethekile...
Izindiza zase-Ethiopia zisolwa ngezikhali ezingekho emthethweni ...
Isikhumulo sezindiza esidumile saseHawaii sithola ukuqashwa okunwetshiwe ...
I-Fraport Group: Imali engenayo kanye nenzuzo yonke ikhuphuka kakhulu...
Ukuvakasha Okusha KwaseTurkey Kugxile Emishadweni